Iibhanki zaseMalawi kwiUlendo Airlink ukukhulisa ukhenketho lwasekhaya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Iibhanki zaseMalawi kwiUlendo Airlink ukukhulisa ukhenketho lwasekhaya
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseMalawi zokuPhula • iindaba • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Oktobha 4, 2019
I-Ulendo Airlink, inkampani yenqwelomoya enexabiso eliphantsi evela eMalawi, yazise ngenqanaba elikhethekileyo lokubhabha kwabaseMalawi kunye nabantu abahlala kweli lizwe ukukhuthaza ukhenketho lwasekhaya. Eli nyathelo, ngokokuhamba kweenqwelo moya, kulindeleke ukuba likhuthaze ukhenketho kwaye linike abantu ithuba lokundwendwela iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi.
Ummeli wenkonzo yorhwebo u-Azaria Manda uthe umntu kufuneka abonise ubungqina bokuba ngummi okanye indawo yokuhlala ukuze onwabele le phakheji. Ummi waseMalawi okanye imali yokuhlala, ifuna ubungqina bobumi okanye bokuhlala kuya kufuneka kubo bonke abakhweli.
I-Ulendo Airlink ikwanazo neenqwelo moya eziya eBlantyre, eLilongwe, eMzuzu, kwiClub Makokola eMangochi, eMfuwe eZambia, eLikoma Island, eLiwonde naseNyika National Park eRumphi.
Igosa eliyintloko lezokhenketho kwiSebe lezoKhenketho u-Ian Mshani uthe olu luphuhliso oluqinisekileyo noluzakukhuthaza ukhenketho lwasekhaya.
Umlawuli olawula iZiko loKuhamba uTsala Mapapa uyiqhwabele izandla iUlendo Airlink ngokwazisa indlela yaseLilongwe-Blantyre kunye nephulo lokujolisa eMalawi.